सिल्टल्ट द्वारा एक कुशल वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रम को सुझाव
अहिले नै, वेब स्क्रैपिंग अनिवार्य व्यापार रणनीति बन्यो प्रायः सबै संगठनहरु लाई यो गोद ले. दुर्भाग्यवश, केहि निश्चित चुनौतीहरूको कारण प्रविधि पूर्णरुपमा शोषण गरिएको छैन. निस्सन्देह, तपाईले चाहानु भएको सामग्री प्राप्त गर्न अनलाइन खोजी गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाई यसलाई प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ. तथापि, त्यो केवल केहि मात्रा संग डेटा सम्भव छ. तपाईं निश्चित रूप देखि एक विशाल डेटा को फसल को लागि एक वेब स्क्रैपिंग उपकरण को आवश्यकता हुनेछ. यहाँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यक्रम अनुभवको आवश्यकता हो.
तपाईंसँग प्रोग्रामिंग अनुभव र ज्ञानको निश्चित स्तर हुनु आवश्यक छ जुन अधिकांश वेब स्क्रैपिंग उपकरण कन्फिगर गर्न सक्षम हुन सक्छ।. तर केवल धेरै थोरै व्यक्तिहरूसँग प्रोग्रामिङ अनुभव छ. यसबाहेक, कोडिंग वेब स्क्रैपिंग उपकरण निकै थोरै र समय-उपभोग पनि अत्यधिक अनुभवी प्रोग्रामरहरूको लागि छ. मुद्दाहरू बदल्न, तपाइँले प्रत्येक लक्षित वेबसाइटको लागि तपाइँको सफ्टवेयरको कोड परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्दछ किनभने हरेक वेबसाइट अनन्य छ. यसैले यो नयाँ वेब स्क्रैपिंग उपकरणले तूफानद्वारा संसारलाई लैजान्छ. यो कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञान आवश्यक छैन, र यो कुशल छ. उपकरणको नाम OutWit Hub
OutWit Hub वास्तवमा एक फायरफक्स एड-अन हो जुन तपाईको ब्राउजरमा डाउनलोड र स्थापना गर्न सकिन्छ।. सफ्टवेयरको साथमा तपाईले आफ्नो माउसको केहि क्लिकहरूसँग विभिन्न वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्नुहुनेछ. जबकि कार्यक्रममा क्षमताहरू डिफल्ट सेटिङहरूसँग विभिन्न प्रकारको वेबसाईटहरू स्क्रैप गर्नका लागि, तपाइँ यसलाई पनि तपाइँका आवश्यकताहरू अनुरूप गर्न अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ.
यहाँ सफ्टवेयर कसरी प्रयोग गर्ने हो
तपाई यसलाई मोजिला एड-अन भण्डारबाट डाउनलोड गर्न र तपाईको फायरफक्स ब्राउजरमा स्थापना गर्नु आवश्यक छ।. स्थापना पछि, एड-अन प्रभाव नभएसम्म तपाईको ब्राउजर पुन: सुरु नगरे सम्म. तपाईंले अनुप्रयोगको बायाँ फलकमा केही सरल स्क्रैपिंग विकल्प पाउनुहुनेछ. यद्यपि यो विकल्प आधारभूत छन्, तिनीहरू पर्याप्त वेबसाईट वा पृष्ठको लिङ्कहरूको कुनै आवश्यक छविहरू र पाठ निकाल्नका लागि पर्याप्त छन्.
तथापि, आधारभूत विकल्पले उन्नत वेब स्क्रैपिंग कार्यहरू गर्न सक्दैन. यदि तपाईँलाई उन्नत विकल्पहरू चाहिन्छ भने, तपाईलाई मोटररेटरहरूमा जानु आवश्यक छ, र त्यसपछि स्क्रैपर्स सेक्शनमा जानुहोस्. तपाईंको लक्षित वेब पेजको स्रोत कोड यहाँ प्रदर्शित हुनेछ. अर्को चरण कोडमा ट्याग गरिएका गुणहरू हेर्नको लागी हो. तिनीहरूलाई आवश्यक डेटा तत्वहरू निकासी गर्न अघि मार्करको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
अब तपाईले "मार्कर पहिले" र "मार्कर पछि" क्षेत्रहरू भर्नु पर्छ र कार्यान्वयन बटन क्लिक गर्नुहोस्. त्यस पछि, तपाईं केवल फिर्ता बस्न र हेर्नुहोस् कि कसरी आउटराइट हब यसको काम गर्दछ. यो कार्यक्रमले तपाईंलाई स्वतन्त्र रूपमा धेरै स्क्रैपर्सहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र तुल्याउँछ, यसैले टर्नआउन्डर समय सुधार गर्दछ.
यो डाटा निकाल्नको लागी यो सामान्य प्रक्रिया हो. Add-on को दस्तावेज खण्ड अलग डेटा निकासी अनुरोध / आवश्यकताहरु को लागि विभिन्न ट्यूटोरियल संग आउँछ. जब तपाइँ तिनीहरूलाई मास्टर गर्नुहुन्छ ती प्रक्रियाहरू छिटो र सजिलो पाउनुहुनेछ. त्यसोभए, यो ट्यूटोरियल धार्मिक अध्ययन गर्न सल्लाहकार छ.
OutWit Hub सँग यसको जटिल परिष्कृत संकलन गर्नका लागी यसको धेरै परिष्कृत प्रकार्यहरू छन्।. त्यसैले, तपाइँ प्रत्येक प्रकार्यको प्रयोग बुझ्न आवश्यक पर्दछ. उदाहरणका लागि, धेरै लक्षित साइटहरू जुन समान ढाँचाहरूबाट डेटा निकाल्न, तपाईँलाई "ढाँचा स्तम्भ" नामक प्रकार्य चाहिन्छ।.
अन्तमा, आउटराइट हब एक उत्कृष्ट डाटा स्क्रैपिंग प्रोग्रामर र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि एड-अन हो।. तपाइँसँग पनि सिक्न सक्ने थुप्रै प्रकार्यहरू छन्. तपाईले प्रयोग गर्नुभएका अधिक जटिल कार्यहरू, छिटो र राम्रो, तपाईको वेब स्क्रैपिंग परिणामहरू हुनेछन् Source .